သငျသညျသီခငျြးကို "မန်း Gegen မန်း" အကြောင်းကိုဘယ်လိုထင်သလဲ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သငျသညျသီခငျြးကို "မန်း Gegen မန်း" အကြောင်းကိုဘယ်လိုထင်သလဲ
ဤသည် SCHWULAH, လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများအတွက်အကြောင်းကိုပျော်စရာများနှင့် perky သီချင်း! - Mann Gegen Mann - SCHWULAH! - Mann Gegen Mann ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရုရှား၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ Rammstein ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုလှောင်ပြောင်ဖို့သတ္တိရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဥရောပမှာမကောင်းဘူး
ဖြစ်ကောင်းထိုသီချင်းကိုတူသောလိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ဂေးနှင့်အခြားသူများ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုနှင့်ထိုသူတို့အဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအုပ်စုထဲမှာသင်ကဂီတကိုနားထောင်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့၏အကြိုက်မှမဟုတ်ပါဘူး, သီခငျြးကိုယျနှိုကျနားထောင်ကြလော့။ ငါကပိုလို့ပြောလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဆိုက်အတွင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
စဉ်းစားရန်ရှိကဘာလဲ? သီချင်းလိင်တူဆက်ဆံ။ ကတူထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သူစာရေးသူလျှင်, သူတို့ဖောက်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒီသီခငျြးမြားအပြာရောင်စွဲရှိသည်ဖို့ဆိုလိုလေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Quote Boris Moiseev သီဆိုခဲ့သလိုဗြာဆနျဆစကားများမရှိ; အပြာရောင် lunuquot;, အရာအားလုံးသေသပ်စွာနဲ့လျောက်ပတ်စွာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ဒီသီခငျြးကိုရှင်းလင်းစွာဖတ်ရှုဖို့မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းညစ်ညမ်းလိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်တားမြစ်ထားပေမယ့်တကယဉ်ကျေးမှုပုံစံထဲမှာဘဲထိုကဲ့သို့သောပြတ်တောက်ယဉ်ကျေးမှုကိုမစကားပြစ်ဒဏ်ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်လိုအပ်မပေးပါ။ ဒီမှာတူသောအဘယ်အရာကိုမျှမပေးလို့ရတယ်။
သငျသညျအပြာသို့မဟုတ် pido..s အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောဤသီချင်း, SCHWULAH ၏ဘာသာပြန်ချက်ကိုဖတ်ရှိသည်။ တစ်ဦးသမားရိုးကျမဟုတ်သောမတ်ေတာအကွောငျးအထဲတွင်သီဆို။ သီချင်းတွေ၏ဘာသာပြန်စာပေကိုဖတ်ရနိုင် ဒီမှာ.
ငါသည်လည်းဤသီချင်းလိုပဲတီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များကသူမ၏လုံးဝကိုယ်လုံးတီးနှင့်ပင်ပစ္စုပ္ပန်သူမ၏သည်အခြားယောက်ျားအတွက်သီခငျြးဆိုဘယ်မှာတော်တော်လေးရိုးကဒီသီခငျြးကိုများအတွက်ဗီဒီယို, လည်းရှိသေး၏။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တစ်ဦးအပျော်တမ်းတီးဝိုင်း Rammstein နှင့်သီချင်း quote; မန်း Gegen Mannquot; အလွန်အကျွံ။
ငါ Quote ၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်; Ramstein; နှင့်အထွေထွေယေဘုယျအားဖြင့် Hard Rock ... .. သင်ရေးမည့်သီချင်းတစ်ပုဒ်သည် Kaifquot; ကဲ့သို့သောဓလေ့ထုံးတမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲဂီတဒီဇိုင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲစာသားကိုယ်နှိုက်၏ semantic load ကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူဖော်ပြသောစကားစုကိုရုရှားဘာသာပြန်ခြင်းဖြင့်လူကိုလူကိုဆန့်ကျင်သည်၊ အချို့ကလူတစ် ဦး ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုကြသော်လည်းကျွန်ုပ်ဤသို့ပြောနိုင်သည်မှာ - Ich bin gegen Ramschtein! .... ကျွန်ုပ်၏ဂျာမန်ဆိုဗီယက်၏ရှေးဟောင်းပုံစံအတွက်တောင်းပန်သည်။ ။
62 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,242 စက္ကန့်ကျော် Generate ။